FAMORIAM-BAHOAKA FANOHERANA FIFIDIANANA :: Handray fepetra hentitra ny mpitandro filaminana • AoRaha
FAMORIAM-BAHOAKA FANOHERANA FIFIDIANANA Handray fepetra hentitra ny mpitandro filaminana
Hitarika korontana ao anatin’ny vanim- potoanan’ny fety. Tena mikasa hamerina ny krizy toy ny tamin’ny taona 2002 tokoa ry Ravalomanana Marc satria fantatra fa hitarika hetsi-bahoaka etsy amin’ny Lapan’ny tanànan’Antananarivo, noho ny voalazany fa fisiana hosoka tamin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny kandidà laharana faha-25, amin’ny sabotsy ho avy izao.
Na mbola tsy nivoaka aza ny voka-pifidianana ôfisialy avy amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC), izay andrasana amin’ny fiandohan’ny volana janoary 2019, dia efa mitaona an’ireo mpanara-dia azy hidina an-dalambe sahady ity Filoha teo aloha mitonona ho mpanangana fa tsy mpandrava ity. Mazava anefa ny an’ny mpitandro filaminana: tsy azo ekena ny fambolena savorovoro eto amin’ny firenena.
Mbola nitohy ny fampitahana vokatra teny amin’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), hatramin’ny omaly. Ireo fitanana an-tsoratra no samy entin’ny tsirairay. Hisy ihany koa io fampitahana io, anio, na dia rahariva amin’ny 4 ora aza no hamoaka ny voka-pifidianana feno vonjimaika ny Ceni. Raha ny vokatra feno, omaly, dia mandresy ny kandida Rajoelina Andry.
Nanambara ny Ceni fa nekena avokoa ny fangatahan-dry zareo mpomba ny kandidà laharana faha-25 na dia efa mihoatra ny tokonan’ izay nofaritan’ny lalàna aza. Ireny efa naneho ny fahitany ny zotram-pifidianana ireny ihany koa ny iraisam-pirenena, tamin’ny alalan’ny fahafaham- po tamin’ny ankapobeny sy ny fanoritsoritana an’ ireo lesoka sasantsasany. Nahazo fankasitrahana tamin’ireo vahiny aza ny Ceni.
Mila fitoniana sy filaminana
Re fa efa nijaikojaiko nanatona ny fitondram-panjakana ihany koa ny ekipan-dry Ravalomanana, andro vitsy lasa izay, saingy nahazo valin-teny mba hametraka ny fitarainany eny amin’ny rafitra natokana hikirakira ny fitoriana momba ny raharaham-pifidianana. Mazava ny voalazan’ny lalàna sy efa naverimberin’ ny sehatra samihafa teto an-toerana hatramin’ireo vondrona iraisam-pirenena: aoka mba ho eny amin’ izay rafitra mahefa amin’ ny fitsarana ny olana momba ny fifidianana no hametrahana ny fitoriana na fitarainana. Izany hoe ny HCC.
taorian’ny fifidianana tamin’ny volana desambra 2001 ka nifanandrinany tamin’ny Amiraly Didier Ratsiraka indray anefa izao teren’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc hitaomana ny mpomba azy amin’ny fanoherana ny voka-pifidianana izao. Fandravana no azo andikana ny fidinana an-dalambe, ary sanatria mety handrava ny firenena indray.
Manoloana izao fikasana hamory vahoaka eny Analakely izao, dia efa nanambara ny handray fepetra hentitra amin’ny mety hisiana fana-korontanana ny fiainam-bahoaka, indrindra amin’izao vaninandro manakaiky ny fetin’ny faran’ny taona izao ny « Préfet de police »-n’Antananarivo renivohitra, ny jeneraly Ravelonarivo Angelo, izay lehiben’ny fitandroana ny filaminana eto Antananarivo renivohitra.: “ tsy nisy ny fangatahana fahazoan-dalana voarain’ izy ireo mikasika an’io hetsika io, hatramin’ny omaly”. “Hisy ny fivoriana manokana miaraka amin’ ireo mpitandro filaminana. Ambarako mialoha anefa fa tsy maintsy hisy ny fepetra hentitra horaisina amin’izay fandikan-dalàna eo satria tsy misy raharaha mandehandeha ho azy izany eto amin’ny firenena “, hoy izy.
Manana andraikitra goavana amin’ny fifehezana ny toe-draharaha mba tsy ho tonga amin’ny savorovoro ihany koa ny governemantan’ny Praiminisitra Ntsay Christian, satria ny hahatontosa sy hahatomombana ny fifidianana hatramin’ ny farany no tena iraka nampanaovina azy ireo. Tsy misy fiandaniana io fa baikoin’ny fametrahana fitoniana sy filaminam-bahoaka maharitra, mialoha-mandritra-aorian’ ny fifidianana ny governemanta am-perinasa.
Omaly, efa nanomboka tokoa ny fandravana nataon-dry Ravalomanana Marc, dia ny fanesorana ny an’ireo mpivarotra manodidina ny Lapan’ny tanàna. Voalaza fa hisy ihany koa ny fikasan’izy ireo hanala an’ireo mpivarotra amoron-dalana manodidina an’Analakely, manomboka anio.
ALIN’NY FARAN’NY TAONA :: Lehilahy mamo telo nanao fanamiana miaramila voasambotra